कब्जियतका घरेलु उपचार यस्ता छन् ! | raynewsdaily.com
कब्जियतका घरेलु उपचार यस्ता छन् !
Friday, June 11th, 2021, 2:02 pm
काठमाडौं । कब्जियत हुनु, पेट खराव हुनु, पेटमा ग्याँस बन्नु, पेट सफा नहुनु खास गरी आजको शहरी जीवनमा आम समस्या भइसकेको छ । कब्जियत खासगरी दुई किसिमको हुन्छ –स्थायी र अस्थायी । स्थायी कब्जियतबाट मुक्ति पाउन निकै कठिन हुन्छ र यो कैयौं रोगको कारण पनि बनिरहेको हुन्छ ।
अनियमित खानपान, शारीरिक श्रमको कमी, भोजन नपच्नु, औषधीहरूको ज्यादा सेवन पानी कम पिउनु आदि कब्जियतका पमुख कारणहरू हुन् । कब्जियतबाट मुक्ति पाउनको लागि खाना राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ । रेसादार खाद्यवस्तु खानामा समावेश हुनुपर्छ । चोकरयुक्त आँटाको रोटी खानु, प्रशस्त पानी पिउनु, समयमा मल त्याग गर्नु कब्जियतबाट बच्ने केही उपायहरू हुन् । अन्य उपायहरु निम्न छन् ।
कब्जियतको समस्या हुनेहरूले बोक्रासहितको गाजर, काँक्रो, मूलाजस्ता फलफूल तथा तरकरीहरू सेवन गर्नुपर्छ ।
चना, भटमासजस्ता गेडागुडी अर्थात् क्वाँटीको सेवन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आँटा, नफलेको चामल, मकै, कोदो, बोक्रा सहितको आलु, फापर र कोदोमा पनि रेसादार पदार्थ पर्याप्त मात्रामा पाइने हुनाले यस्ता पदार्थको सेवन गरेमा कब्जियत हुनबाट बच्न सकिन्छ । गर्भवती महिलाले पर्याप्त मात्रामा पानी र झोल पदार्थ जस्तै–तरकारीको रस, दालको रस, मोही, दूध आदि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आर्युबेदिक उपचार विधी निम्न छन्